Accueil > Gazetin'ny nosy > Morondava: Tsy nanaiky ny famoriam-bahoaka hataon’i Andry Rajoelina
Morondava: Tsy nanaiky ny famoriam-bahoaka hataon’i Andry Rajoelina
Tamin’ny alakamisy faha 22 martsa 2018 teo dia namoaka lahatsoratra mikasika ny fanakanan’ny ben’ny tanànan’i Morondava ny famoriana olona hataon’ny depiote avy any amin’ity toerana ity izahay teto amin’ny La Gazette de la Grande Ile, tao amin’ny pejy faha 12 izay mitondra ny lohanteny hoe: “sakanan’ny ben’ny tanàna tsy hanao tatitra ny depiote”.
Nanao fanambarana noho izany ny solontena nalefan’ingahy ben’ny tanàna izay nanatona anay ka nilaza fa tsy marina ny filazana fa tsy nanaiky ny tatitra hataon’ny depiote ity ny mpitondra fanjakana aty Morondava. Mbola tsy nanao tatitra tamin’ny vahoaka na adiny iray ny depiote aty Morondava hatramin’izay fotoana niasany izay. Tsy mipetraka aty izy fa na mivory na tsy mivory ny antenimierampirenena dia mijanoana aty Antananarivo ity depiote ity. Ny zavamisy tamin’ny fangatahana izay nataony dia toerana izay noezahiny fa handraisana an’i Andry Nirina Rajoelina izay mikasa hanao fampielezan-kevitra mialoha toa ny nitranga tany Ambilobe iny. Izany dia noho ny loharanom-baovao izay nolazain’ireo olona mpiara-miasa aminy eto Morondava. Raha tatitra marina no hataony amin’ny vahoaka no notadiavin’ity depiote ity hoy izy dia efa nomena alalana amin’ny toerana hafa izy nefa dia tsy nety izany. Ity toerana alohan’ny fidirana ny tanànaben’i Morondava ity hatrany no tadiaviny izay handraisana ny famoriana olona hitsenan’ny Mapar an’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Te hampiasa hafetsifetsena ny depiote ity ka izany no fonosin’ny fangatahany.
Tsy mbola andron’ny fampielezan-kevitra izao ka tsy azo ekena ny fitaka ataon’ny antoko hamoriana olona mialohan’ny fotoana toa izao.